अमेरिकामा बस्ने नेपाली महिलाहरुको आवाज
Home विचार / दृष्टिकोण अमेरिकामा बस्ने नेपाली महिलाहरुको आवाज
महिलाको नेतुत्व बिकास आजको आवश्यकता
अमेरिका विश्व कै एक स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक देश हो। यहाँ १९६०-७० तिर नै लाखौ महिला अधिकारबादीहरु महिला अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलनमा उत्रे। जसको फ़लस्परुप यस देशमा लैङ्किग विभेद गर्न पाईदैन। घर, समाज र राज्यमा महिला र पुरुषको अवशर र अधिकार बारबरी पाउने कानुन र सामाजिक मान्यता छ । स्वतन्त्र रुपमा महिलाहरु पनि पुरुष सरह हरेक कुरामा अघि बढ्छन। आफ्नो जीवनको निर्णय आफै गर्न पाउने स्वतन्त्रताका साथ प्रजातान्त्रिक मुलुकमा रहेर पनि नेपाली महिलाहरुको भने नेतृत्व बिकास हुन सकेको छैन। नेपाली समुदायमा महिलाहरुको संख्या झन्डै पुरुष सरह नै देखिएता पनि समाजको नीति निर्माण क्रियाकलापहरुमा महिलाहरुको संख्या अति नै न्यूनतम रहेको अवस्थाले गर्दा महिलाहरुको बिचार र मान्यता समाज र देश निर्माणका कामहरुमा आउन सकीरहेको अवस्था छैन। जसले गर्दा महिला बर्ग ओझेलमा परिरहेका छन। बिकसित देशमा बसेर पनि किन हुन सकेको छैन त नेपाली महिलाहरुको नेतृत्व बिकास ?
भनिन्छ महिला र पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भनेर जो एक अर्का बिना अगाडि बढ्न सक्दैन। जसको अर्थ देश बिकासमा दुबैको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। महिला भनेको समाजको आधा अंग हुन्। जसले परिवार, समाजको उन्नात्तिमा ठुलो योगदान पुर्याउदछ। भने अहिले एकाशौ शताब्दीमा आएर पनि नेपाली महिलाको नेतृत्व बिकास हुन नसक्नु भनेको अत्यन्तै दुखको कुरा हो। देशमा मात्र नभएर बिदेशमा आईपुगेर पनि नेपाली महिलाहरुको मानसिकता चार भित्तामा नै सिमित रहन्छ। नेपाली समाजमा महिलाहरुलाईको बिचारलाई समावेश गर्ने तथा उनीहरुलाई हौसला एवं प्रोत्साहन दिएर आगडि बढ्ने बाताबरण दिने खालको सोचको बिकास अझै भैसकेको छैन।
तर, अहिलेको आधुनिक एबं बैज्ञानिक युगमा महिला कमजोर छैनन्। हाम्रो नेपाली समाजको सोच्ने शक्ति कमजोर हो। यसलाई परिबर्तन गर्न समानता र बिकासमा बिश्वास राख्ने सोचहरु एकजुट भएर महिला र पुरुषको हकअधिकार र अवशरमा बराबरी ल्याउँनुछ। महिलाले पनि स्वाभिमान, स्वस्तित्व एवं स्वतन्त्र जीवन जिउँनुछ। त्यस्तै परिवार, समाज र राष्ट्र निर्माणको हरेक कृयाकलापमा महिलाको बिचार र भूमिका समाबेश हुन अति नै महत्वपूर्ण छ। किनकी एउटी महिलाको बिकास भनेको एउटा परिवार, समाजको बिकास हो। त्यसैले म भन्न चाहान्छु महिलाको नेतृत्व बिकास आजको आवस्यकता हो।
नारी दिवस किन ?
लक्ष्मी खरेल थापा
विश्व जगतमा मार्च ८ लाई अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवसको रुपमा हरेक बर्ष विभिन्न नारी जागरण कार्यक्रमहरुको आयोजना गरि धुनधामका साथ मनाईन्छ। आधा अकाश ढाकेको नारीहरुको सम्मानमा त्यस्तै उनीहरुको हक, हित र अधिकारको सुनिश्चित गर्न यो दिवस मनाईन्छ। १०४ बर्ष भन्दा पहिला विश्वको कुनै पनि समाजमा नारीको कुनै अस्तित्व थिएन। मानव अधिकारको नाममा मतदान गर्न समेत अधिकार थिएन न्युजीलैण्ड र बेलायत दुई देशमा बाहेक नारीहरुलाई। अहिले आएर विश्वको केहि देश बाहेक सबै देशहरुमा यो अधिकार प्राप्त छ। त्यस्तै, नारी भएकै कारण बराबार काम गरेर पनि परिश्रमी पुरुषको तुलनामा धेरै कम हुन्थ्यो। यसमा पनि धेरै समानता आईसकेको छ। त्यसैले जब सम्म नारीहरुले आफुमा परेको अन्यायको बिरोध गर्दै आफ्नो हक अधिकारको लागि आवाज उठाउदैंन तब सम्म समाजमा परिबर्तन आउदैन। नारी र पुरुष एक अर्काको परिपुरक वा रथका दुई पाँग्रा हुन् भने अवशर र अधिकार पनि बाराबारी हुनु पर्छ भन्ने नारी दिवसको आवाज हो।
यस दिवसले नारीहरुलाई आफ्नो हक, हित र अधिकारप्रति सचेत गराउनुको साथै घर, परिबारबाट हेपिएका वा जात, लिङ्ग, धर्मका नाममा गरिने असमान ब्यबहारबाट पिडित नारीहरुको आबाजहरुलाई बाहिर निकाल्न हौसला साथै मौका दिन्छन जसले गर्दा बिभिन्न संचार माध्यम द्वारा संसार भरि उनीहरुको बिचार र आवाज पुग्छन। यसो गर्दा सबैले कहाँ के भई रहेको भन्ने थाहा पाँउछन र समाजमा जचेतना जगाउदै एक अर्कालाई सहयोग गर्न सजिलो हुँन्छ। पुरुष सरह अबसर पाएका सफल महिलाहरुको बारेमा यस्ता कार्यक्रममा जानकारि दिने, नारी सफलताका कथाहरु सुनाइने पनि गरिन्छ जस्ले गर्दा आफु केहि गर्न सक्दिन भनेर दबिएर बसेका नारी हरुको मनोबल बढ्छ। अरु नारीले गर्न सक्छन भने म पनि गर्न सक्छु भनेर आत्मबल बढ्छ। जसले गर्दा नारीलाई कमजोर दृष्टिले हेर्ने समाजको आँखामा नारी कमजोर छैन भन्ने संदेश दिन्छ।
जब नारीमा आफ्नो हक, अधिकारको बारेमा ज्ञान हुन्छ तब एउटा घरमा मालिक र दासी नभई जीवनसाथि हुन्छ। अनि त्यस घरमा सच्च प्रेमको बास हुन्छ जहाँ सच्च प्रेम हुन्छ त्यो घर स्वर्ग सरह हुन्छ। असल परिवारहरु मिलेर नै सुन्दर समाजको निर्माण हुन्छ। त्यसैले नारी दिवस मनाउ सुन्दर समाज बनाऔ।
छोरीले स्वर्गको ढोका खोल्छे
तारा पौडेल चालिसे
विश्वको ईतिहास हेर्ने हो भने महिलाले पुरुषले गर्ने सबै काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाण भैसकेको छ। त्यति मात्र नभएर छोरी मानिसमा एकैचोटी धेरै काम गर्न सक्ने क्षमता साथै सम्झना सक्ने क्षमता छोरा मानिसमा भन्दा बढी रहेको पनि प्रमाण भैसकेको एकाईशौ शताब्दीमा आएर पनि छोरा नभए स्वर्गको ढोका बन्द हुन्छ भन्ने रुढिबादी सोच राख्ने हाम्रो समाजलाई मुर्ख मात्र होईन महामूर्ख भने हुन्छ। यस सोचलाई म चुनौती दिदै भन्न चाहान्छु की मेरा दुई छोरीहरु साक्षी र शिक्षा जसले हाम्रो लागि स्वर्गको ढोका खोल्नेछन। यहिँ नै सत्य हो किनकी जो स्वर्गको कुरा गरेको छ हाम्रो समाजले त्यो काल्पनिक मात्र हो, अहिले सम्म कसैले पनि त्यो स्वर्ग देखेको छैन। स्वर्ग र नर्क यहि धर्तीमा छ। छोरीलाई पनि छोरा समान अवशर दिए पछि उनीहरु एउटा असल स्वाभिमान मानिस हुन्छ जसले मात्र यस समाजलाई स्वर्ग बनाउन सक्छ।
जुन पिडा छोरा जन्माउदा एउटी आमाले भोग्छे त्यहि पिडा छोरी जन्माउदा पनि भोग्छे। एउटी आमाको लागि आफ्नो सन्तान बराबर छोरा होस् वा छोरी अवशर पाउनु पर्छ बराबर अनि हेरौ छोरीले कसरि स्वर्गको ढोका खोल्नेछ भनेर। जनकपुरकी सीता, भारतका पुर्व प्रधानमंत्री ईन्दिरा गान्धी जवारिलाल नेहरुको एक्ली छोरी, अनि बेलायतकी महारानी एलिजावेथ पनि छोरी नै हुन्। यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् जसले स्वर्गको ढोका खोलिदिएको छ।
छोरीसंग यति धेरै तागत छ की स्वर्गको ढोका त के यस धर्तीलाई नै स्वर्ग बनाई दिन्छिन। भन्छन मुर्खले स्वर्गलाई नर्क बनाई दिन्छन भने विद्धवानले नर्कलाई स्वर्ग। त्यसैले आफ्नो कुनै पनि सन्तानलाई अवशरहरुबाट बन्चित नगरौ। स्वर्गको ढोका खोल्न सक्ने असल सन्तान बनाऔ।
महिला र पुरुषको समान अधिकार किन ?
महिला र पुरुष रथका दुई पांग्र भनिन्छ। जसरि एउटा रथ सहि तरिकाले चल्न दुवै पांग्र सक्षम हुन जरुरि छ त्यस्तै गरि एउटा जीवन, घर, समाज र राष्ट्र सहि ढंगले चल्नको लागि महिला र पुरुष दुवै बराबरी सक्षम हुन जरुरि छ। एउटा मानिस तब मात्र सक्षम हुन्छ जब उसको लागि घर बाहिरको सुनौला अवशरहरुको ढोका खुल्ला हुन्छ र त्यसलाई सदुपयोग गर्न उसको अधिकार रहन्छ। तर, दुर्भाग्य संसारमा नै महिलाले पुरुष सरहको अधिकार र अवशरहरु पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यसमा हाम्रो समाज पनि अछुतो रहन सकेको छैन।
गाँस, बाँस र कपाँस मानिसको प्राकृतिक आधारभूत आवस्यकताहरु हुन्। हामी मानिस एक सामाजिक प्राणि भएको हुनाले हामी समाजमा मिलेर बस्छौ। र यस सामाजिक संरचनाका नियमहरु हामीले नै बनाउछौ। जसले हाम्रो दैनिक जीवन देखि समाज, देश निर्माणमा ठुलो भूमिका खेल्दछ। प्रकृतिले दिएको महिला र पुरुषको शारीरिक भिन्नतालाई सामाजिक विभेदमा लगेर महिलालाई घर भित्र सिमित र पुरुषलाई आर्थिक आर्जन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारीको भारले सबै अधिकार र अवशरहरुमा विभेद ल्यायो। जसले गर्दा रथका दुई पांग्र बाराबार हुनबाट बन्चित गरेको अवस्था छ।
हाम्रो नेपाली समाजमा बराबर अधिकार भन्ने कुरालाई अझै महत्व दिएको छैन। महिलालाई सामाजिक, राजनैतिक र शैक्षिक तथा हरेक क्षेत्रमा पुरुष सरह अवशर र अधिकार पाउनु बाराबरी हुनु हो। त्यसैले यो कुरा बुझ्न महिला र पुरुष दुबैमा चेतना आउन एकदमै जरुरी छ। अवशर र अधिकार पाएका महिलाहरु कुनै पुरुष भन्दा कम छैनन्। एउटी महिला सक्षम हुनु भनेको एउटा परिवार सक्षम हुनु हो। एकाईसौ शताब्दीको बिकास संगसगै महिलाको बिकास हुन जरुरि छ। त्यसको लागि महिला र पुरुषको अधिकार बारबार हुन त्यत्तिकै जरुरी छ।
एनडब्लुजीएनमा लाग्नुको मेरो रहस्य
अमेरिकाको व्यस्त जीवनशैलीको बाबजुद पनि हामी क्यालिफोर्नियाबासी दिदीबहीनीहरु मिलेर नेपाली महिला विश्व सन्जाल क्यालिफोर्नियाको माध्यमले हामी लगायत संसारभरका हामी जस्तै दिदीबहिनीहरुलाई जागरण र शसक्तिकरण गर्न साथमा साथ काँधमा काँध मिलाएर अगाडी बढ्न पाउँदा ज्यादै खुशी छु। विदेशको ठाँउमा जति नै सुख पाए पनि मनमा आफ्नो ठाउँको माया र यादले सताउदो रहेछ। कहिले कहिँ त अहिले भर्खर उडेर जाउँ जस्तो मन हुन्थ्यो मलाई जब मैले आफु जस्तै दिदीबहिनीहरु एउटै उदेश्यले आफ्नो साथमा पाए मलाई यहि विरानो ठाउँ आफ्नो जस्तो लाग्न थाल्यो। म एक्लो छैन मेरो साथमा मेरो साथीहरु छन् भन्ने महसुस मलाई हुदै आयो जसले गर्दा दिनहरु रामाईलो हुदै आउँन थाल्यो। मेरो आत्मबल पनि बढ्दै गएको महसुस हुन थाल्यो। मेरो जीवन जिउँन सजिलो साथै फराकिलो हुदै गएको छ एन डब्लु जी एनमा लागेर।
हामी महिनावारि बैठक पालैपालो गरि घरमा नै पट्लक गरेर बस्छौ। कहिले कहिँ कन्फ्रेन्स बैठक गर्छौ। बैठकमा हामी हरेक बिषयहरुमा छलफल गर्छौ जसले गर्दा बिचारको आदानप्रदान हुदोरहेछ। बोल्न सक्ने साथै सुन्न सक्ने क्षमताको बिकास हुदोरहेछ। मैले मेरो जीवनमा कहिलै माईक समतेर भाषण गर्न सक्छु होला जस्तो सोचेको थीइन तर, आज यस संस्थामा लागेर कहिले बोल्ने होला जस्तो लाग्छ। मेरो जीवनमा आएको परिबर्तनले मलाई धेरै कुरा सिकाउदै अगाडी बढ्ने प्ररणा दिएको छ। त्यसैले मेरो यस अनुभवले सिकाएको कुरा छोटकरीमा भएपनि यस संसारलाई बाड्न चाहान्छु। हामी नारीहरुसँग वास्तबमा आफुले सोचेको भन्दा बढी क्षमता छ। दैनिक जीवनमा अति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षेत्र जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र नेतृत्वको बिकास हामीले गर्न पर्छ। एक्लोले पनि केहि गर्न सक्छ भने हामी मिलेर धेरै गर्न सकिदो रहेछ। धेरैले सोध्छन अमेरिकाको व्यस्ततामा पनि एनडब्लुजीएनमा लाग्नुको रहस्य के हो रु भनेर सायद यहिँ नै मेरो उहाहरुलाई जवाफ होला।
अप्सरा खड्का सिजापति
सपना भनेको जीवनको लक्ष्य हो। सपना बिना जीवन अधुरो नै हुन्छ त्यसैले सपना देख्नु मानिस हुनुको अर्थ हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी धेरै जनाको सपना जीवनमा सुख पाउने र सफल हुने नै हुन्छ। तर, कसरि जीवन सुखी हुन्छ र सफलता कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा भने ख्याल भने राख्दैनौ। जसले गर्दा सपनाहरु अधुरो रहन्छन। जे होस् यो सपना भन्ने कुरा उमेर, वाताबरण र संगतमा भर पर्ने कुरा रहेछ। सानो छँदा मिठो खाने र राम्रो लाउने सपना थियो मेरो सायद धेरै मेरो साथीहरुको पनि किनकी हाम्रो समाजमा छोरीलाई पढाएर ठुलो मान्छे बन्ने भन्दा पनि छोरीको कर्म अर्काको घरमा भनेर जन्मना नपाउदै देखि विभेद शुरु हुन्छ। त्यहि संस्कारमा हुर्किन्छ भने उसले देख्ने सपना अवस्य त्यहि हुन्छ। किनकी उसको बाल मनस्थितिमा नै छोरी भने कै भाग्य खाने जात भनेर सिकाएको हुन्छ। त्यसैले मेरो सपना पनि बाल्य अवस्थाको मिठो खाने र राम्रो लाउने सपना उमेरसँगै बढ्दै गैर किशोरी अवस्थामा एउटा असल श्रीमानसँग बैबाहिक जीवनमा कस्नु थियो। त्यसपछि आमा बन्ने सपना पनि पुरा भयो। साच्चै भगवानले मेरो प्रार्थना सुने जस्तै गरि मेरो सबै सपनाहरु पुरा गरि दिए जस्तो लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा।
एउटी असल छोरी, श्रीमती र आमा हुने मेरो सपना पुरा भएको छ। अब एउटी असल मान्छे बन्ने मेरो सपना छ। छोरी र छोरामा विभेद होईन समान अवशर र अधिकार पाउनु पर्छ। त्यस्तै नारी र पुरुषको बिचमा भएको सामाजिक विभेदलाई अन्त गरि बाराबरी अवशर र अधिकार हुनुपर्छ। मैले जुन सपना देखे मेरो छोरीले देख्ने सपना फरक होस्। अर्काको भाग्य खाने सपना होईन आफ्नो कर्म खाने सपना देख्न सक्ने होस्। यहिँ मेरो सपना छ। एनडब्लुजीएनमा लागेर दिदीबहिनीहरुसँग मिलेर आफुमा भएको क्षमतालाई यस समाजमा बाड्ने मेरो सपना छ। आफु सहित सम्पूर्ण नारीलाई आफ्नो कर्तब्य र अधिकारमा सचेत गराउन सकु दुख सुखमा एक अर्कालाई मदत गर्न सकु भन्ने मेरो सपना छ। आशा छ मेरो यस सपनामा भगवानले पनि साथ दिनेछ भनेर।
प्रिश्किला प्रधान दाहाल
सुन्दरता भन्ने बित्तकै जुन सुकै मानिसको मन मष्तिस्कलाई छुन्छ। बिशेष गरि नारी सुन्दरता कै चर्चा हुने गर्दछ यस संसारमा जस्तै सुन्दरी प्रतियोगिता हरेक शहर, देश र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा। आखिर के होला त नारी सुन्दरता भनेको सबैको आ(आफ्नै बिचार भए झैँ मेरो बिचारमा सुन्दरता दुई प्रकारको हुन्छ।